I-Mini Casa Cortez
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Linda
I-Mini Casa Cortez inikeza indawo yokupaka yangasese, i-patio, iminyango ye-patio. I-Mini Casa ihlotshiswe nge-motif yegalofu iphelele ngombono omuhle we-Cortez Golf Course.
Kukhona umbhede omusha wendlovukazi onezingubo zokulala ezintsha, izihlalo ezithokomele, ama-ottoman, ne-TV.
I-Mini Casa ihlinzeka ngesiqandisi., umenzi wekhofi, ibhodwe, i-toaster, ne-microwave. Leli khishi lenzelwe ukuvakasha kweqiniso. Jabulela!!
Siklame igumbi lokugezela elihle elineshawa yamathayela angu-6x3-1/2.
Ngaphandle kwetafula, izihlalo kanye ne-grill kuqedela le ndlela yokubaleka Enhle !!
I-Mini Casa ixhunywe kwelinye iyunithi yethu ngehholo elifushane. I-Mini Casa inendawo yayo yokuvula, kodwa, iyingxenye yawo wonke umpheme omkhulu osetshenziswa yi-'la Casa Cortez. Kuzoba nebhokisi lezimbali elikhulu eligudlukayo elinama-private trellis ukuze lichaze lezi zindawo ezimbili. Izithombe ezizayo
4.94 ·169 okushiwo abanye
Siyakujabulela ukusebenzisana nezivakashi zethu. Kungakanani ukusebenzisana kunqunywa amashejuli ethu. Sifuna izivakashi zibe nethuba lokujabulela konke okunikezwa yi-Hot Springs Village, ngakho siyatholakala ukuze siqiniseke ukuthi lokho kuyenzeka!
Siyakujabulela ukusebenzisana nezivakashi zethu. Kungakanani ukusebenzisana kunqunywa amashejuli ethu. Sifuna izivakashi zibe nethuba lokujabulela konke okunikezwa yi-Hot Springs V…